Iiseti zokuTyisa abantwana - i-Huizhou Melikey Silicone Product Co, Ltd.
Isidlo sangokuhlwa sabantwana
» IBakala lokutya
»Inkonzo yokumisa enye
BEST baby tableware yoMvelisi Ihowuliseyili china
I-tableware yabantwana wakho ngokutya okuqinileyo. Ziluncedo kakhulu ekuncedeni abantwana baphuhlise izakhono zokuzondla kunye nezinye izakhono ezifanelekileyo zemoto. I-tableware yabantwana ihlala yenziwe ngezinto zokutya ezikhuselekileyo kwiintsana, eziyilelwe ukunciphisa ubumdaka kunye nokuchitheka ngexesha lokutya komntwana.
Ngo-2016, saseka mveliso yethu Huizhou, China ukuvelisa ezikumgangatho ophezulu baby tableware . Sithembisa ukuthengisa nokuthumela ngaphandle iitafile zabantwana kumazwe onke kwihlabathi liphela, ngamaxabiso asezantsi, amakhonkco onikezelo apheleleyo kunye nokuhamba okukhawulezayo. Ngotyalo-mali oluqhubekayo kumaziko emveliso kunye netekhnoloji, ngoku sele siphuhlisile saba ngumenzi ophambili kunye nevenkile yeetafile zomntwana e China.
Sineminyaka engaphezu kwama-12 yamava ekuveliseni i-silicone molds kunye nokuvelisa iimveliso ze-silicone. I-Melikey ivelisa iintlobo ezahlukeneyo zetafile yomntwana, including silicone baby feeding set bibs, baby bowls, baby plates, baby cups, etc.
Ngaphezulu kweminyaka engama-6 yamava kwicandelo le-tableware yomntwana, sinokuqonda okungcono baby tableware , the processing of silicone products and the trade rules between countries. Therefore, we are your best silicone wholesale manufacturer of infant feeding set in China. Today, we are very honored to be able to cooperate with customers all over the world.
Siyile ezi bhibhi zomntwana zilula kwaye zikhuselekile ngokokuyilwa kweebhibhsana zabantwana
Oomama abaninzi bacebisa ukudala amava okondla abantwana babo. Sebenzisa uthotho lwethu lwebhayibhile olonwabisayo ukwenza ukuba umntwana wakho azive ekhululekile kwaye ecocekile. Ayizukuchitheka phantsi. ngaphandle kwevumba.
Yenziwe ngezinto zodidi oluphezulu kwaye zihlala ixesha elide, ungawuchaza umahluko ukuba nje uziva
ungacocwa ngokucoceka phantsi kwamanzi abalekayo kunye nokucoca. Inokucocwa kwindawo yokuhlamba izitya, ukugcina amanzi kunye nexesha.
Sisebenzisa kuphela izinto ezisemgangathweni ophezulu. Ngokungafaniyo nezinye iipleyiti zabantwana zokutya ezinokuqulatha i-PVC kunye nezinye iikhemikhali ezikrokrisayo, iimveliso zethu zenziwe nge-100% kwinqanaba lokutya elingena-bisphenol A, i-polyvinyl chloride, i-phthalates kunye nokukhokelela ekuqinisekiseni ukuba uKhuseleko lomntwana.
Ingasetyenziselwa kwindawo yokuhlamba izitya, ii-microwaves kunye nee-oveni, kunye nokutshintsha ngokulula ukusuka kwifriji okanye kwifriji ukuya kwi-oveni okanye kwimicrowave.
Iikomityi zethu zokutsala zinokulungiswa ngokukhuselekileyo nakweyiphi na indawo egudileyo, kubandakanya iitreyini eziphezulu zosihlalo. Oku kuyenza ibe yimveliso efanelekileyo kubazali abaqeqesha abantwana babo ukuba batye ngokuzimeleyo.
Misela Ukondla kwabantwana
Iseti yeDinerware yabantwana
I-Silicone Baby Plate Feeding Kit -Ikiti yethu yosana yenziwe nge-bisphenol A-free silicone, izinto ezikudidi lokutya, kunye nokungabi nasongo, okukunika uxolo olupheleleyo lwengqondo.
Iseti yokondla umntwana ngokusebenza ngokukuko konke: iseti yokutyisa ipleyiti yosana, ukufunxwa okunamandla kokondla
okungakhathazeki Ayilungelanga abantwana kuphela, kodwa ikwalungele ii-microwaves, iifriji, ii-oveni kunye nezitya zokuhlamba.
Umgangatho ophezulu wemveliso ephezulu ekhokelela kwiimveliso ze-silicone! Ukuhanjiswa okukhawulezileyo. Inkampani emangalisayo ukujongana nayo. UDenny uya ngaphezulu nangaphaya! Ndicebisa kakhulu iMelikey Silicone.
Izitya zokutsala ezilunge kakhulu. Umgangatho ulunge kakhulu kwaye imibala ingcono kakhulu kunemifanekiso.
Iimveliso ezifunyenweyo zikumgangatho ophezulu kakhulu kwaye zibukeka zintle. Uyabona ukuba inkampani iyazingca ngokubonelela ngezinto ezisemgangathweni. Ukuhanjiswa kwakukhawuleza kakhulu, zakuba zithunyelwe iimveliso zam kwathatha kuphela iintsuku ezintlanu ukufika kwam. Ngokubanzi, ndinamava amahle okujongana nenkampani kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kuyala ngakumbi kubo！.
umgangatho obalaseleyo! Izinto zi-silicone kodwa azinuki "iplastiki / irabha", kwaye iziva ikumgangatho ophezulu ngexabiso layo. Ndicebisa ukuba ndikhanyele ophathe imibuzo yam kunye neeodolo kakuhle. undigcina ndihlaziywa kunye nezibonelelo zabo zamva nje, nazo. Awunakulinda uku-odola kwakhona!
Ndimele ndivume ukuba le mveliso intle kwaye inomdla. Umgangatho ukwindawo ephezulu !!! Ndingayincoma amaxesha asisigidi.
Uyisebenzisa kanjani iSeti yeDinnerware
Kutheni Ukhetha Ukufana?
Ivenkile yokuThengisa uNye
I-Milleck yoyilo kwaye ivelise ngokweemfuno zabathengi, kwaye ibonelela ngeenkonzo ze-OEM / ODM ezenziwe ngokwezifiso.
Iimveliso zethu zidlulile kwi-FDA, SGS, COC kunye nolunye uhlolo olusemgangathweni, kwaye zibonelela ngezatifikethi zobungcali ngakumbi kubathengi kwihlabathi liphela.
Q1. Zeziphi izinto ezikwiseti yesidlo sangokuhlwa?
A: Ngokwesiqhelo, sinokulandela ezi zinto zinokwenza iseti epheleleyo yezinto ze-dinnerware:
1). Ibhayibhile yesilicone
2). Iseti yesitayile ejikeleze isitya okanye iseti yesitya esenziwe ngesikwere
3). Ipleyiti yesilicone
4). Ikomityi yokutya okune-abicah
5). Indebe ye-silicone sippy
6). Ikomityi yokusela abicah
7). Isixhobo se-silicone pacifier
8). Ityala lesilicone pacifier
9). Umtya wesilicone pacifier
Zonke ezi zinto zilapha ngasentla zingalingana ngemibala efanayo, abathengi banokubopha kwaye bathengise kwimarike. Unokukhetha izinto ezininzi kubo ngokukhululekileyo, enkosi.
Umbuzo Loluphi ukhetho lombala kwezo zinto zokondla?
A: Ukuza kuthi ga ngoku sinemibala ethandwayo emi-5 ukuya kwezi-13 kwezi zinto zininzi, ezinokuthi zihambelane nemibala efanayo kuseto olunye luphela, kwaye iqela lethu liphuhlisa imibala emitsha ethandwayo ngalo lonke ixesha, liya kuhlaziywa ngexesha elifanelekileyo ukuba kukho nayiphi na inkqubela . Enkosi.
Umbuzo. Yintoni i-MOQ yezinto zokutya zangoku?
A: iiseti ezingama-50 kwiseti nganye, unokuxuba imibala.
Umbuzo Leliphi ixesha lokuKhokela kwizinto zangoku zokutya?
A: Ngokwesiqhelo sinayo yonke imibala yokondla izinto kwistokhwe njengoko ezi zizinto zethu ezishushu zokuthengisa, sinokuthumela kuwe malunga neentsuku ezi-3 ukuya kwezi-7 zokusebenza ngokokulandelelana kwentlawulo yabathengi, kwangoko ugqibezela, kwangoko ungabamkela, enkosi wena.
Umbuzo 5. Ngaba ungenza uphawu logo kwezi zinto? Ufuna iinkcukacha ezingaphezulu.
A: Ewe, ngokuchanekileyo. Iqela lethu linamava apheleleyo kwiiprojekthi ezenzelwe wena. Kodwa nganye iiprojekthi ezilungiselelwe kufuneka zifikelele kwi-MOQ.
Ngokwesiqhelo sineetekhnoloji ezimbini zeelogo kwisalathiso sakho:
1). I-logo ye-silk yokuprinta i-
MOQ: ii-500 ii-pcs kwinto nganye, ukuhlawulwa kwesikrini yi- $ 50 ngokusekwe kwindawo yokuprinta i-logo ENYE YOMBALA kwinto nganye, ixabiso leyunithi kufuneka lidibanise $ 0.1 ngokusekwe kwixabiso langaphambili.
Ixesha lokukhokela lijikeleze iintsuku ezili-12 ukuya kwezi-18 zokusebenza.
2). I-logo ye-Lasering
MOQ: ii-pcs ezingama-300 ngento nganye, ixabiso leyunithi kufuneka lidibanise i-0.2 yeedola ngokusekwe kwixabiso langaphambili.
Ixesha Lead kuphakathi iintsuku zokusebenza-15 ukuya 25, lasering logo kwimfuno ngamnye kumba ixesha ngakumbi, kuba kufuneka laser logo omnye omnye eziziinqambi omnye, ixesha yemveliso iya kuba njalo ngaphezu isilika logo yoshicilelo
Yeyiphi logo ukhetho na ofuna ? Ngaba pls usithumele uyilo logo yakho? Emva koko sinokwenzela itemplate yelogo kuwe okokuqala. Enkosi.
Q6. Ngaba unokwenza iphakheji yesiqhelo yokutya izinto? Ufuna iinkcukacha ezingaphezulu.
A: Ewe, sinako. Kodwa okokuqala kufuneka sazi ukuba zeziphi izinto ofuna ukuzenza kwiiphakheji zesiko? Ufuna iipakeji ezahlukileyo okanye iphakheji yonke iseti enye?
: Iikhompyuter ezingama-500 ezihlawulisa isikrini zi- $ 50 ngokusekwe kwindawo yokuprinta i-logo ENYE YOBUME kwisingxobo, ixabiso leyunithi kufuneka lidibanise $ 0.1 ngokusekwe kwixabiso langaphambili.
2). Ibhokisi yamaphepha
MOQ: ii-pcs ezili-1, ixabiso leyunithi liphakathi kwe- $ 0.5- $ 0.6 kwisiqwenga ngasinye ngokusekwe kwisantya sakho sokugqibela
MOQ: ii-pcs ezili-1, ixabiso leyunithi lixabisa i-0.3- $ 0.55 kwisiqwenga ngasinye, ixabiso lokugqibela liya kusekelwa kuyilo lwakho lokugqibela.
4). Iphakheji yethu yesiqhelo yento nganye yingxowa ye-OPP, akukho sidingo sokuhlawula iifizi ezingaphezulu.
5). Ingxowa ye-CPE, kufuneka wongeze i-0.1 yeedola kwisiqwenga ngasinye
Yeyiphi iphakheji oyifunayo? Iinkcukacha ezingaphezulu zinokunikezelwa emva kokuba ubuyele kuthi, enkosi.
Umbuzo 7. Ulawula njani izinto zakho ezisemgangathweni?
A: Ngokwesiqhelo senza uhlolo LWEXESHA LEXESHA ELINESITHATHU ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kubathengi bethu.
Uvavanyo lwexesha lokuqala: I-QC yenziwe emva kokuba izinto ziphume ekubunjweni.
Ukuhlolwa okwesihlandlo sesibini: Abasebenzi benziwe ngexesha lokudibana okanye ngaphambi kokushicilelwa kwesilika.
Uvavanyo lwexesha lesithathu: Unobhala wendlu yokugcina ngaphambi kokuthunyelwa.
Olu hambo lokuhamba komsebenzi lweXESHA elimaXESHA luya kunciphisa umgangatho ophantsi kakhulu.
Q8.Zeziphi izatifikethi onazo?
A: Sinezethi ezipheleleyo zezatifikethi zazo zonke izinto zokutyisa isidlo sangokuhlwa ukuza kuthi ga ngoku, i-FDA, i-BPA yasimahla, i-CPC kunye nezatifikethi zemigangatho ye-EN, zonke ezi zatifikethi zingathunyelwa xa kufuneka, enkosi.
Umbuzo 9. Ngaba ukhe wathumela kwi-FBA ngaphambili?
A: Ewe, ngokuchanekileyo, sinabathengi abaninzi abathengisa izinto eAmazon, kwaye iqela lethu linamava apheleleyo okusebenzela abathengi baseAmazon, zonke iimpahla zihlamba kwiFBA kufuneka zithobele imigaqo ethile, enjengokuba ibhokisi nganye inokulayisha kuphela iiyunithi ezingaphantsi kwe-150, nganye iyunithi kunye nebhokisi nganye kufuneka ibeke ibhakhowudi, njl. Sinokunceda abathengi ukuba benze i-CPC elungileyo yokugqiba uluhlu eAmazon, ect, ukuba unayo nayiphi na imibuzo pls nxibelelana nathi ngokukhululekileyo, enkosi.
Umbuzo10. Usebenzisa liphi ijelo lokuhambisa? Zingaphi iintsuku zexesha lokuhamba?
A: Ngokwesiqhelo sinazo ezi ndlela zilandelayo zokuhambisa ngenqanawa ukhetho lwakho:
1). Ukucacisa: njenge-DHL, i-FedEx, i-TNT, njl., Ijelo elikhawulezayo kakhulu, ngesiqhelo iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-8 zexesha lokuhamba, elikhawulezayo, neliphezulu.
2). Ukuthunyelwa komoya: ixesha lokuhamba lijikeleze iintsuku ezili-13 ukuya kwezi-18 zokusebenza, lingenza imvume yesiko kwaye likuhlawulele imisebenzi, kuthetha ukuba ungahlala ekhaya ulinde iipasile zakho.
3). Ukuhanjiswa ngenqanawa koLwandle okanye ukuthunyelwa kukaloliwe: ixesha lokuhamba lijikeleze iintsuku ezingama-28 ukuya kwezingama-45 zomsebenzi zijikeleze, zingenza ukucocwa kwesiko kunye nomsebenzi ohlawulwayo, iya kuba lelona jelo liphantsi phakathi kwabo, kodwa icothe kakhulu.
Ayizizo zonke iipasile ezinokukhetha zonke ezi ndlela zintathu. Ngaba ungasithumela i-oda yakho kuqala? Emva koko sinokwenza esona sisombululo sisiso esifanelekileyo, enkosi.
1. Ngaba iintsana zifuna iibhibhi?
Ngokubanzi, sicebisa ukuba abantwana abasandul 'ukuzalwa banxibe iibhibhi zabantwana because some babies spit during breastfeeding and general feeding. This will also save you from having to wash baby clothes every time you feed. We also recommend placing the fasteners on the side because it is easier to fix and remove.
2. Yeyiphi eyona ibhedi yomntwana ilungileyo?
Ixesha lokondla lihlala likhohlakele kwaye liza kudyobha iimpahla zomntwana. Njengomzali, ufuna ukuba abantwana bakho bafunde ukutya bodwa ngaphandle kokubangela ukudideka. Iibhokhwe zomntwana ziyimfuneko kakhulu, kwaye imisebenzi eyahlukeneyo ifuna iintlobo ezithile zebhibhi.
3. Zithini iingxaki zebhibhi zosana?
Le i-silicone baby bib yenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zoomama banamhlanje. Umsebenzi, iintlanganiso, ukuqeshwa koogqirha, ukuthenga ivenkile, thabatha abantwana ukusuka kumhla wokudlala - ungakwenza konke. Yithi ndlela-ntle ekucoceni iitafile, izitulo eziphakamileyo kunye nokutya kwabantwana phantsi! Akukho sidingo sokuhlamba iibhibhi zabantwana ezininzi veki nganye. Nantsi into ekufuneka uyazi xa uthatha isigqibo sokuba ube nebhibi efanelekileyo.
4. Uyenza njani ibhibhi yomntwana?
Sithanda iibhibhi zesilicone . Kulula ukuzisebenzisa, kulula ukuzicoca, kwaye kwenza ukuba ixesha lokutya lilula kakhulu. Kwamanye amazwe ehlabathi, bakwabizwa ngokuba ziibatch catcher okanye iibhokisi zeepokotho. Nokuba ubabiza njani, baya kuba yi-MVP yomdlalo wexesha lokutya komntwana wakho.
5. Ingaba umntwana angaqala nini ukunxiba ibhibhi?
Xa umntwana wakho eneenyanga ezi-4-6 kuphela ubudala, abasakwazi ukutya amashwamshwam, ukulungiselela ukutya kwabo kunye nokuthintela ukungcoliseka kweempahla, uhlala ufuna ukufumana eyona bhibhi yomntwana, ehlangabezana neemfuno zomntwana wakho.
6. Ngaba iibhayibhile zesilicone zikhuselekile?
Iibhayibhi zethu ze-silicone zenziwe nge-100% yokutya okuvunyiweyo kwe-FDA. Ii-silicones zethu zikhululekile kwi-BPA, i-phthalates kunye nezinye iikhemikhali ezingcolileyo.
Ibhendi i-silicone bibayinakulimaza ulusu lomntwana wakho kwaye ayizukuqhekeka ngokulula.
7. Ucoceka njani iibhibhi zesilicone?
Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi inqanaba lokondla olukulo, ibhibhi yinto ebalulekileyo yintsana. Ngokusetyenziswa kwebhibhi, unokuzibona uyihlamba ibhibhi phantse rhoqo. Njengoko bephelelwa, kungasathethwa ke isixa esikhulu sokutya kwabantwana okuwela kubo, ukuzigcina zicocekile kunokuba ngumceli mngeni.
8. Ungayifaka ibhayibhile yesiliclic kwindawo yokuhlambela izitya?
Abicah ebhatyini waterproof, leyo ifakwe kwi dishewasher. Ukubeka ibhibi kwishelufu ngaphezulu kwesitya sokuhlambela, ihlala inciphisa amabala angafunekiyo! Sukusebenzisa iblitshi okanye izongezo ze-bleach ezingezizo ezeklorini.
9. Bungakanani ubungakanani bebhibhi lomntwana
Eyona bhibhi yomntwana ilungileyo , ubungakanani bomntwana bulunge kakhulu kubantwana abaneminyaka yobudala ephakathi kwiinyanga ezi-6 ukuya kwiinyanga ezingama-36.
Imilinganiselo ephezulu kunye nezantsi imalunga ne-10.75 intshi okanye i-27 cm, kwaye imilinganiselo yasekhohlo nasekunene imalunga nee-intshi eziyi-8.5 okanye i-21.5 cm.
Emva kokuhlengahlengisa kubungakanani obukhulu, umjikelo wentamo umalunga nee-intshi ezili-11 okanye i-28 cm.
10. Iyintoni ingongoma yebhayibhile yomntwana?
Iibhokhwe zabantwana zizinto ezinxitywa ngabantwana abasandul 'ukuzalwa okanye iintsana ukukhusela ulusu lwabo olubuthathaka kunye nempahla ekutyeni, ekutshayeni nasemathe.
Ukunxiba ibhibhi yosana kunokunciphisa uxinzelelo oluninzi kwaye kwenze lula ukuhamba.
Iibhibhi zabantwana, le mveliso ilula kwaye intle kakhulu inokukunceda ukondla iintsana okanye iintsana ngaphandle kokubangela ukudideka.
11. Usana luyeka nini ukusebenzisa ibhibhi
Iibhokhwe zabantwana ziimveliso zabantwana ekufuneka uzithengile, kwaye ngokukhawuleza ngcono. Ngale ndlela, unokuwathintela amabala kwiingubo zomntwana wakho okanye uthintele umntwana wakho ekumanzi kwaye kufuneka atshintshe ilaphu. Iintsana zihlala ziqala ukusebenzisa iibhibhi kwiveki e-1 okanye ezi-2 emva kokuzalwa.
12.Uyisebenzisa njani ibhibhi ikhuselekile?
Wonke umntu uyazi ukuba iintsana zifuna iibhibhi. Nangona kunjalo, akunakwenzeka ukuba uqaphele imfuneko iibhibhi zabantwana de ungene kwindlela yabazali. Unokuhamba ngokulula iintsuku ezininzi, kwaye imisebenzi eyahlukeneyo ifuna iintlobo ezithile zebhibhi. Sifanele sikhethe ibhibhi efanelekileyo kakhulu kubantwana bethu kwaye siyisebenzise ngokukhuselekileyo. Nazi ezinye izinto zokwazi malunga neebhayibhile.
13. Ngaba kufuneka ubeke ibhibhi kusana olusandul 'ukuzalwa
Le bhibhi yomntwana yi ngumncedi ukuthintela ukudideka xa usana ukondla, ugcine usana icocekile. Nkqu neentsana ezingakhange zitye ukutya okuqinileyo okanye ezingantsanga pearl ezimhlophe zinokusebenzisa amanye amanyathelo okhuseleko. Ibhayibhile inokuthintela ubisi lwebele lomntwana okanye ubisi olungumgubo ekuweleni kwiingubo zomntwana ngexesha lokondla, kwaye incede ekusombululeni ukugabha okungaphephekiyo okulandelayo.
14. Ungazithengisa njani iibhibhi zomntwana?
Ukuba uceba ukuthengisa iibhibhi zabantwana njengeshishini lakho. Kufuneka uzilungiselele kwangaphambili. Okokuqala, kuya kufuneka uyiqonde imithetho yelizwe, uphathe iphepha-mvume kunye nezatifikethi, kwaye kufuneka ube nesicwangciso sohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa njalo njalo. Ke ungaqala ishishini lokuthengisa ibhibhi lomntwana!
15. Yintoni omele uyazi malunga neebhiciksi zebuntwana abicah?
Zethu ezikumgangatho ophezulu iibhibhi zesilicone akayi ngothanda, chip okanye iinyembezi. Ibhendi yesilicone ehleliyo kunye neyomeleleyo ayizukucaphukisa ulusu olubuthathaka lweentsana okanye iintsana. Yenziwe kwibakala lesilicone kwaye ayiqulathanga i-formaldehyde, bisphenol A, bisphenol A, polyvinyl chloride, phthalates okanye ezinye iityhefu. Amabhanti e-silicone angenamanzi athintela ukutya ekungeneni ekudibaneni neempahla zabantwana, oko kuthetha ukuhlamba kancinci.
16.Zona zilungileyo izitya zomntwana kufuneka ukhethe?
Le isitya somntwana are made of safe food-grade materials, allowing babies to make feeding safer, easier and more fun. They are cute and stylish, and they are not easy to break. Very useful for guiding babies during the weaning and self-feeding stages.
17. Ngaba iipleyiti zesilicone zikhuselekile kwimicrowave?
Le I-silicone iplate yomntwana anokusetyenziswa nowezitya, iifriji kunye iimayikhroweyivi: le itreyi encane unako ukumelana amaqondo aphezulu ukuya ku-200 ℃ / 320 ℉
18. Ngaba izitya zesilicone zikhuselekile kwiintsana?
Le sitya abicah yenziwe ekhuselekileyo ukutya-grade abicah. Ukungabinetyhefu, i-BPA yasimahla, ayiqulathanga naziphi na izinto zeekhemikhali. I-silicone ithambile kwaye iyamelana nokuwa kwaye ayizukulimaza ulusu lomntwana wakho, ukuze umntwana wakho ayisebenzise ngokukhululekileyo.
19. Ngaba iipleyiti ze-microwave zesilicone？
Isicwecwe somntwana esine-silicone sinokumelana nobushushu obuphezulu kakhulu kwaye silungele ukusetyenziswa kwimicrowave okanye kwi-oveni.Ungayibeka ipleyiti yesilicone ngqo kwishelufa ye-oveni, kodwa uninzi lwabapheki nababhaki abayenzi le nto kuba ipleyiti yesilicic ithambile ukuba kunzima ukususa ukutya eontini.
20. Ndilufundisa njani usana lwam ukubamba icephe?
Kuyacetyiswa ukuba abazali bazise usana lwecephe as soon as possible when starting to introduce solid food to the baby. We have compiled some tips to help you determine when to use tableware and what steps to take to ensure your baby is on the right track to learn how to use the spoon successfully.
21. Uqala ngokobudala obunjani ngecephe ukondla umntwana?
Inkqubo yomntwana wakho yokuzondla iqala ngokwaziswa kokutya kweminwe kwaye ngokuthe ngcembe ikhule ibe kukusetyenziswa kwamacephe omntwana and forks. The first time you start spoon-feeding the baby is about 4 to 6 months, the baby can start to eat solid food.
22. Leliphi icephe elilungele umntwana?
Xa umntwana wakho ekulungele ukutya ukutya okuqinileyo, uya kufuna elona khosi lilungileyo lomntwana ukwenza lula inkqubo yotshintsho. Ngokuqhelekileyo abantwana banokhetho oluqinileyo kwiintlobo ezithile zokutya. Ngaphambi kokuba ufumane elona khosi lilungileyo lomntwana wakho, kusenokufuneka uzame iimodeli ezininzi.
23. Uzihlambulula njani iipuni zeenkuni?
Isipuni somthi sisixhobo esiluncedo kwaye sihle nakweyiphi na ikhitshi. Ukucoca ngononophelo kwangoko emva kokuzisebenzisa kuya kunceda ukuthintela ekufumaneni iibhaktheriya. Funda ngokugcina ngokufanelekileyo i-tableware yeplanga ukuze ikwazi ukugcina inkangeleko entle ixesha elide.
24.Ndingalazisa njani usana lwam ngecephe?
Bonke abantwana bakhulisa izakhono kwisantya sabo. Akukho xesha libekiweyo okanye ubudala, kuya kufuneka ungenise umntwana icephe . Izakhono zomntwana wakho ziya kumisela "ixesha elifanelekileyo" kunye nezinye izinto.
25. Ukucoca isitya se-silicone
Uninzi lwezinto zemichiza ziya kuguquka kubushushu obuphezulu kunye nenkqubo yonyango lwasemva konyango. Kodwa kuyimfuneko ukuyicoca ngaphambi kokuyisebenzisa okokuqala. Le baby neendebe abicah umenzi kukuxelela indlela ukucoca isitya abicah.
26. Uyenza njani isitya se-silicone singanuki?
Isitya se-abicah kukutya okutya okutya okutya ukutya, akukho nto ingenabungozi, kwaye akunambitheki. Nangona kunjalo, ezinye iisepha ezomeleleyo kunye nokutya kunokushiya ivumba eliyintsalela okanye iTaste kwitafile yesilicone.
27. Uyenza njani isitya se-silicone？
Izitya ze-abicah ziyathandwa ziintsana, zingenayo ityhefu kwaye zikhuselekile, i-100% ekumgangatho wokutya abicah. Ithambile kwaye ayizophuka kwaye ayizukulimaza ulusu lomntwana. Inokutshiswa kwi-oven microwave kwaye ihlambuluke kwi-dishwasher. Singaxoxa ngendlela yokwenza isitya se-silicone ngoku.
28. Abicah isitya indlela yokukhusela?
Isitya kukutya okumgangatho weesilicon akunabumba, akunakupholisa kwaye akunaphunga, nokuba akunabungozi nangayiphi na indlela. Ezinye iintsalela zokutya ezinamandla zinokushiyeka kwitafile yesilicone, Ke kufuneka sigcine isitya sethu se-silicone sicocekile.
29. Uyila njani isitya esinokuthambeka esenziwe ngesilicone
Le silicone folding bowl is made of food-grade materials vulcanized at high temperature. The material is delicate and soft, harmless to the human body, safe and non-toxic at high temperatures, and can be used with confidence.
Want to promote self-feeding for babies, but don't like cleaning up huge mess? How to make feeding time the happiest part of your baby's day? Baby plates anokunceda umntwana wakho ukuba ondle ngokulula. Nazi izizathu zokuba abantwana baxhamle xa usebenzisa iipleyiti zabantwana.
If you can establish a 4 month old unokumisela schedule, it will help make life easier when you want to start a 5 month old baby routine or even a 6 month old routine for a health, happy baby!
Konke ukutya okutyiswa iintsana kufuna izixa ezahlukileyo, kuxhomekeke kubunzima, ukutya kunye nobudala. Ngethamsanqa, ukujonga ishedyuli yokondla yosana lwakho yonke imihla kunokunceda ukunciphisa ukuqikelela.
yomqala lwaba neengxakana ukuba umntwana oyintombazana, lwaba neengxakana yemvelo, abicah teether , abicah baby teether , teether kakhulu ngenyanga-4 ubudala , abicah lwaba neengxakana amaso ,